जण्डीस भएका बेला ‘केही’ बार्नु पर्दैन
डा. कृष्ण्गोपाल महर्जन काठमाडौं print
जण्डीस भनेको शरीरमा देखिने एउटा चिन्ह हो। यो रोगको लक्षण हो। आँखामा पहेलो देखिने, पिसाब पहेलो देखिनुलाई साधानरणतया जण्डीस भएको भनिन्छ।
सरल भासामा आँखा, छाल र मुखभित्र पहेले हुनुलाई जन्डिस भनिन्छ। यो कुनै रोग नभएर विभिन्न रोगमा देखिने लक्षण मात्र हो। साधारणतया रगतमा बिलिरूविनको मात्रा एक मिलिग्राम र १०० एमएलभन्दा कम हुन्छ।
बिलिरुविनको मात्रा तीन मिलिग्रामभन्दा बढी भए मात्र आँखा पहेलो देखिन्छ। बिलिरुविन विभिन्न अवस्थामा बढ्न सक्छ र जन्डिस देखा पर्ने तीन विशेष अवस्था रहन्छ।
रगतको रातो कण अत्याधिक नष्ट भएर धेरै बिलिरूविन निस्की कलेजोले त्यसलई लिन नसक्नु, कलेजोको रोग लगेपछि रगतबाट बिलिरुविन लिएर पित्तमा फ्यााक्न नसक्नु र पित्तको नली कुनै कारणले अवरुद्ध भई पित्त आन्द्रामा जान नसक्नु जन्डीस हो।
हेपाटाइटीस ‘ए’ र ‘इ’ पानीबाट सर्ने जण्डीस हो। हेपाटाइटीस ‘बि’ र ‘डी’ रगतबाट सर्ने गर्छ। सामान्यत काठमाडौंमा हुने जण्डीस हेपटाइटीस ‘ए’ र ‘इ’ हो।
हेपटाइटीस ‘ए’ बच्चाहरुलाई हुन्छ भने हेपाटाइटीस ‘ई’ अरु उमेर समूहलाई हुन्छ। सबै जण्डीसलाई एउटै बाकस भित्र राख्नु हुँदैन। अहिले चर्चा गर्न लागिएको जण्डीस भनेको भाइरलका कारण हुने जण्डीसका बारेमा हो।
पानीबाट सर्ने मात्रै हो नेपालमा धेरै चर्चामा आउने र हुने जण्डीस भनेको ‘ए’ र ‘इ’ हो। यो लेखमा हेपटाइटीस ‘ए’ र ‘इ’ को विषयमा चर्चा गरिएको छ।
हेपटाइटीस ‘इ’ मुख्य गरी गर्मीको समयमा हुन्छ।
नेपालमा त्यो पनि काठमाडौंमा बढी जण्डीस हुनुको मुख्य कारण भनेको पानी नै हो। धाराको पानी र ढलको पानी बेलाबखत मिसिने गर्छ त्यो पानी खाएको कारण जण्डीस हुन्छ।
धाराको पानी उमालेर अथवा त्यसमा औषधि नहाली खाइने भएकोले जण्डीस हुन्छ। यस्तो पानी खाएपछि शरीरमा पानीमार्फत किटाणुको प्रवेश हुन्छ जसले गर्दा जण्डीस हुन्छ।
जण्डीस भनेको कलेजोमा संक्रमण भएपछि निस्कने एक किसिमको लक्षण हो।
भाइरस शरीरभित्र गएर त्यो भाइरस कलेजोमा गएपछि जण्डीस देखिने हो। दिसा मिसिएको पानी खाएको कारणले यस्तो खालको जण्डीस हुन्छ।
आँखा पहेलो हुन्छ
सबैभन्दा मनपर्ने खाना पनि खाना मन लाग्दैन
यी लक्षण देखिनासाथ चिकित्सककहाँ जानुपर्छ। जण्डीस ठूलो समस्या होइन। तर, गर्भवती र बृद्ध बृद्धालाई जण्डीस भयो भने अलि बढी होसियार हुनुपर्छ।
साधारण जन्डिसले नवजात शिशुबाहेक अरू सबैलाई त्यती धेरै असर गर्दैन।
वयस्कमा १ हुनु र १० हुनुमा कुनै फरक पर्दैन भने २५ भन्दा माथि पुगेमा मिर्गौलाको समस्या हुनसक्छ। नत्र बिलिरूविनले आँखा र छाला पहेँलो हुने, पिसाब गाँढा हुने, दिसाको रङ हल्का पहेँलो हुने र कहिलेकाहीँ माटोजस्तो हुने गर्छ।
जण्डीस भएको शंका लागेमा यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। हेपटाइटिस ‘ए’ होकी ‘इ’ हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिलालाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ। लापरबाही गर्‍यो भने ज्यान समेत जान सक्छ।
हेपटाइटिस ‘ए’ भए पनि र हेपटाइटीस ‘इ’ भए पनि उपचार भने झण्डै उस्तै हुन्छ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिला सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ। जण्डीस भएको छ भनेर फलफूल मात्रै खाने गरिन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन। यसको लागि भोजनको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ।
जण्डीस भएको बेलामा शरीरलाई धेरै शक्ति चाहिन्छ। जे खायो भने शक्ति आउँछ त्यो खानुपर्छ। चिनीपानी खान सकिन्छ, मासुभात खान सकिन्छ। जाड रक्सी, चुरोट खैनीबाहेक सबै खान हुन्छ। कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन जुन खान नहोस्।
पहिलाभन्दा अझै धेरै खानुपर्छ। भात पनि दुई चार गास भए पनि धेरै खानुपर्छ। शक्ति भयो भने मात्रै रोगसँग लड्न सकिन्छ। बेसार खान हुँदैन नुन खान हुँदैन भन्ने गरिन्छ। यो सबै गलत कुरा हो। नबुझेर यस्तो भनिएको हो।
जण्डीस भएको बेलामा लापरबाही भने गर्नु हुँदैन। आराम बढी गर्नुपर्छ। शक्ति दिने खानेकुरा खानुपर्छ। जण्डीस भएको बेलामा जाड रक्सी खायो भने सबैभन्दा बढी खतरनाक हो। यस्तो अवस्थामा बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्छ। समान्य चिल्लो खाएमा त्यसले असर गर्देन।
१. नीमको चार वटा हरियो पातलाई पिसेर एक गिलास पानी र चिनी घोलेर पातलो सफा कपडाले छान्ने र साँझ बिहान पिउनाले पहेंलो रोगबाट छुटकारा मिल्छ।
२. करेला पिसेर पानी मिसाएर बिहान साँझ पिउनाले पहेंला समस्यामा लाभ दिन्छ।
३. २०० ग्राम दहीको एक चुट्की फट्किरी मिलाएर दिनभरी प्यास लाग्दा पिउनाले पहेलो समस्या छिटो ठिक हुन्छ।
४. १२५ ग्राम मुलाको पातको रसमा ३० ग्राम चिनी मिलाएर बिहान साँझ पहेंला समस्यामा लाभ दिन्छ।
५. ६० ग्राम अमलाको रस र २५ ग्राम शुद्ध मह आधा गिलास पानीमा मिलाएर हरेक दिन पिउनाले पहेंला रोगमा लाभ दिन्छ।
६. तीन चम्चा मोहीमा तीनवटा पिपला भिजाएर राखी चौबिस घण्टापछि पिस्ने र पानीसँग पिउने। हरेक दिन एक एक पिपला बढाउँदै दशवटासम्म पुर्याउने र पुन एक एक पिपला घटाउँदै जाने एवं रितले हरेक दिन सेवन गर्नाले पहेले रोग, लिभर समस्या, पुरानो ज्वरो, अरुची, अपच आदि समस्यामा लाभ हुन्छ।
जण्डीस कसरी रोक्ने ?
सबैभन्दा पहिला यसलाई हुन नदिनु नै महत्वपूर्ण हो। सबैले पानी उमालेर खायो भने जण्डीस हुँदैन। उमालेको पानी खान मन परेन भने पियुस हालेर पनि खान सकिन्छ। पियुसले पनि पानीमा भएको भाइरसलाई मार्ने भएकोले यस्तो पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो गरेमा जण्डीस हुँदैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २०, २०७४ ०८:४९:५९